मध्य नेपाल Archives – Kalika News
प्रतिमा कुमाल, चैत २५, चितवन । लकडाउनको १५ औँ दिन चितवनको सुरक्षामा थप कडाई गरिएको छ । कालिका मिडियाको टिम आज (मंगलबार) स्थलगत रिपोर्टिङका लागी जाँदा पश्चिम चितवनको सुरक्षा व्यवस्था पहिलाको भन्दा प्रभावकारी देखिएको थियो । चौविसकोठी, मंगलपुर, चनौली हुदै मेघौली सम्म पुग्दा चोक चोकमा सुरक्षाकर्मीहरु पहिले भन्दा बढी संख्यामा तैनाथ रहेका थिए । उनिहरुले अत्यावश्यकका सवारी साधनहरुलाई पनि केही दुरीमा बसेर चेकचाज गरी रहेका थिए । अत्यावश्यक सवारी साधनहरुलाई...
हेटौँडा, २५ चैत (रासस) वाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारले आगामी वर्ष ल्याउन लागिएको बजेटमा जनमुखी व्यावहारिक र कषि र उद्योगको उत्पादनलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकता दिने बताउनुभएको छ । मन्त्री ढुङ्गेलले वाग्मती सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि बजेटको तर्जुमा गर्न आज यहाँ प्रदेश नीति योजना आयोगका पदाधिकारी, अर्थविज्ञसँग बजेट तर्जुमाको लागि छलफल र बजेटको मस्यौदा तयारको लागि गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आगामी आवको...
तस्विर- शम्भु बि.क ...
लकडाउनको आज १५ औं दिन मेघौली र चनौली यस्तो देखियो (फोटो फिचर)
लकडाउनमा चितवनका यवाहरुको दैनिकी….
प्रतिमा कुमाल, चैत २५, चितवन । अहिले संसारभर कोरोना भाइरसले त्रास पूर्ण वातावरण सृजना गरेको छ । विश्वका धेरै देशमा यसको संक्रमणले धेरैले ज्यान गुमाई सकेका छन् । नेपालमा पनि यो भाइरस भित्रि सकेको छ । अहिले समम ९ जनामा यो संक्रमण देखिएको छ । हाम्रो देशमा संक्रमण देखिए पनि कसैको ज्यान भने गएको छैन् । सरकाले यसको लागि तीव्र गतीमा काम पनि गरिरहेको छ । लकडाउनलाई कडाईको साथ...
भरतपुरमा परीक्षण गरिएका २१ जनाकै कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ
बसन्त ढुङगाना, कालिका चितवनको भरतपुरमा स्थापना गरिएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा हिजो परीक्षण गरिएका २१ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।प्रयोगशाला स्थापना उपसमितिका संयोजक डा।कृष्णसागर शर्माका अनुसार आज विहान आएको रिपोर्टमा सबैको कोभिड–१९नेगेटिभ आएको हो । सोमबार भरतपुर कोरोना विशेष ९अस्थायी० अस्पतालबाट १६ जना, समुदायबाट ४, गुन्जमान हस्पिटलबाट एक जनाको परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइको थियो । चितवनमा गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पहिलो पटक आएको हो । यसको क्षमता एक पटकमा ९० जना सम्मको...
चितवनमा स्थापना गरिएको ल्याबमा पहिलो नतिजा सार्वजनिक÷२१ वटै रिपोर्ट नेगेटिभ
चितवन, चैत्र २५ । चितवनको भरतपुरमा स्थापना गरिएको कोरोना परीक्षण प्रयोगशालामा हिजो परीक्षण गरिएका २१ जनाकै रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ । प्रयोगशाला स्थापना उपसमितिका संयोजक डा.कृष्णसागर शर्माका अनुसार आज विहान आएको रिपोर्टमा सबैको कोभिड–१९नेगेटिभ आएको हो । सोमबार भरतपुर कोरोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालबाट १६ जना, समुदायबाट ४, गुन्जमान हस्पिटलबाट एक जनाको परीक्षणका लागि प्रयोगशालामा पठाइको थियो । चितवनमा गरिएको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पहिलो पटक आएको हो । यसको क्षमता एक पटकमा ९०...
लकडाउनको समयमा कालिकाकर्मी निरन्तर सुचना प्रवाहमा (फोटोफिचरसहित)
मिरा रानाभाट चैत्र २५,कालिका । नेपाल सरकारले लकडाउन लागु गरेको दुई साता पुग्दा नपुग्दै फेरी एक साता लकडाउनलाई लम्बाएको छ । दोस्रो संक्रमित भेटिए लगतै चैत्र ११ गते बिहान ६ बजेदेखी लागु गरिएको लकडाउन चैत्र १८ गते सकिने थियो तर त्यही बिचमा फेरी अरु ३ जनामा कोरोनाको संक्रमण भेटियो । लकडाउन सकिन २ दिन मात्रै बाँकी रहंदा सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी पूनः एक साता अर्थात चैत्र २५ गते मध्यरातको १२ बजे...
चितवनमा स्वास्थ्यकर्मीहरु रित्ता क्वारेनटाईन कुर्दै……. (audio report)
कोरोनाको संक्रमण हुन नदिन भन्दै चितवनका स्थानीय तहहरुले सञ्चालनमा ल्याएको क्वारेन्टाईन खाली छन् । कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै धमाधम स्थापना भएका क्वारेनटाईनमा बस्न कोहि नजाँदा स्वास्थ्यकर्मीहरु रित्ता क्वारेनटाईन कुरेर बसिरहेका छन् । सहकर्मी केदार शर्माको एक रिपोर्ट । ...